Raysalwasaarihii Mali oo iscasilay kadib markii xabsiga la dhigay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Raysalwasaarihii Mali oo iscasilay kadib markii xabsiga la dhigay
Raysalwasaarihii Mali oo iscasilay kadib markii xabsiga la dhigay
Posted: Khalid Yusuf - December 11, 2012
Raysalwasaaraha wadanka Mali Cheick Modibo Diarra ayaa shaaciyey inuu is casilay kadib markii ay xireen ciidamada Militariga ee dalkaasi horey inqilaabka uga sameeyey.
Raysalwasaare Diarra ayaa xilka la wareegay kadib markii militarigii wadankaasi inqilaabka ka sameeyey beesha caalamka ku khasabtay inay sameeyaan maamul shibil ah. Balse Raysalwasaaraha ayaa la sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay si weyn dhanka siyaasada isugu khilaafsanaayeen ciidamada Militariga.
Cheick Modibo Diarra ayaa lagu waday inuu shalay u dhoofo magaalada Paris ee dalka Faransiiska halkaasi oo uu u aadi lahaa arrimo caafimaad, hase yeeshee intuusan airporka gaarin ayaa waxaa xabsiga u taxaabay ciidamada militariga.
Afhayeen u hadlay ciidamada Militariga ayaa sheegay inay xireen Raysalwasaaraha asagoo isku dayaya inuu wadanka ka baxo, kadib markii uu sameeyey xaalad abuur iyo kicin dad, waa sida ay hadalka ku dhigeen ciidamada Militariga.
Cheick Modibo Diarra muddadii uu Raysalwasaaraha ahaa wuxuu si weyn ugu dadaalay inuu taageero ciidan ka helo wadamada Galbeedka Afrika ee ECOWAS iyo Qaramada Midoobay ayadoo xarigiisa kusoo beegamayo xili Golaha Amaanka lagu wado inuu u codeeyo qorshe ciidamada ECOWAS loogu dirayo dalkaasi Mali.
Wadamada Afrikaanka Galbeed ee ECOWAS ayaa qorsheeyey in ciidamo gaaraya 3300 askari u diraan dalka Mali si ay awooda dalkaasi ugu gacan geliyaan Xukuumada.
Waqooyiga dalka Mali ayaa waxaa hada heysta Jabhada Tawaareqda oo ayadu ku dhawaaqday Gooni isutaag, waxaase jabhadaasi ka garab dagaalamaya kooxo lala xariirinayo Al Qaida, kuwaasi oo ayaguna qorshahooda u gaarka ah wata iyo in xukuumad ku shaqeysa Shariicada Islaamka ay ka dhisaan dalkaasi Mali.
Macada sababta ciidamada Militariga u xireen Raysalwasaaraha xiligan walow la sheegay in Saraakiisha Militariga ay marwalba isku dayaan inay wiiqaan awooda Xukuumada shibilka ah, waxayna arrintan sababtay in dowlada ay dhumiso Waqooyiga dalkaasi oo ay la wareegeen xoogaga kasoo horjeeda.
Cheick Modibo Diarra oo dhawaan loo magacaabay Raysalwasaaraha kumeelgaarka ah ayaa ah nin aqoonyahan ah oo horey uga soo shaqeeyey hay’ada NASA ee dalka Maraykanka, isla markaana ahaan jiray Madaxweyne kuxigeenka Afrika ee shirkada computerada soo saarta ee Microsoft.
Iscasilaadiisa kadib ayaan la aqoon in militariga u ogolaan doonaan inuu isaga baxo wadanka.